Imibuzo Evame Ukubuzwa - Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd.
1. Yiluphi ulwazi okufanele lunikeze i-skid yokwelapha igesi yemvelo?
1. Ukwakheka kwegesi okuningiliziwe: mol %
2. Ukugeleza: Nm3/d
3. Ingcindezi yokungena: I-Psi noma i-MPa
4. Izinga lokushisa lokungena: °C
5. Izimo zesizinda nezimo zezulu, njengezimo zezulu (ikakhulukazi izinga lokushisa lemvelo, kungakhathaliseki ukuthi liseduze nolwandle), amandla kagesi kagesi, noma ngabe kunomoya wensimbi, amanzi okupholisa (ngokwezidingo zangempela zenqubo),
6. Dizayina futhi wenze ikhodi namazinga.
2. Mude kangakanani umjikelezo wokukhiqiza?
Kuncike emikhiqizweni ehlukene, ngokuvamile izinyanga ezi-2 kuya kwezi-4.
3.Iziphi izinsiza ongazihlinzeka?
Asikwazi nje ukwenza zonke izinhlobo zamadivayisi ngokwemidwebo yakho, kodwa futhi singakunikeza isixazululo esinemininingwane ngokuya ngezidingo zakho ezithile.
4. Kuthiwani ngesevisi yangemuva kokuthengisa?
5. Ingakanani ububanzi bomkhiqizo wakho?
Sisebenza ngokukhethekile ekuklanyeni, i-R&D, ukukhiqiza, ukufakwa, kanye nokusebenza kwensizakalo yezinhlobo ezahlukahlukene zokwelashwa kwekhanda likawoyela negesi, ukuhlanzwa kwegesi yemvelo, ukwelapha uwoyela ongahluziwe, ukubuyiselwa kwe-hydrocarbon ukukhanya kanye nokusetshenziswa kwegesi yemvelo amasethi aphelele emishini, ijeneretha yegesi yemvelo. .
Imikhiqizo eyinhloko yilezi:
Imishini yokwelapha ye-Wellhead
Imishini yokumisa igesi yemvelo
Iyunithi yokutakula i-hydrocarbon elula
Imishini yokwelapha uwoyela ongahluziwe
Ijeneretha yegesi yemvelo